(၁၀)နှစ်သမီးကို ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ကာ အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား - People Media Myanmar
Home (၁၀)နှစ်သမီးကို ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ကာ အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
(၁၀)နှစ်သမီးကို ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ကာ အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့၊ အောင်မေတ္တာ(ဃ) ရပ်ကွက်တွင် (၁၀) နှစ်သမီးကို အိမ်နီချင်းနေထိုင်သူက ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ကာ အဓမ္မပြုကျင့်မှု အောက်တိုဘာလ ၂၂ရက် ညနေ (၅)နာရီအချိန်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အောင်မေတ္တာ(ဃ)ရပ်ကွက်နေထိုင်သူ ဒေါ်…. (၆၅)နှစ်သည် ညီမဖြစ်သူ၏ နေအိမ်သို့ ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်သွား ရောက်ရာလမ်းတွင် အိမ်နီးချင်းဖြစ်သူဒေါ်….မှနောက်မှပြေးလိုက်လာပြီး “မြေးဖြစ်သူ (၁၀) နှစ်သမီးကို အိမ်နီချင်းဖြစ်သူ ဦး…..(၅၉)နှစ်မှ ၎င်း၏နေအိမ်ပေါ်တွင် သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်နေသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရ ကြောင်း”ပြောပြသဖြင့် ဦး….(၅၉)နှစ်၏ နေအိမ်သို့ ချက်ချင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဦး… (၅၉)နှစ်၏နေအိမ်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ ဦး…၏ သုံးပင်မြေစိုက်အိပ်ခန်းခြေရင်းတွင် မြေးဖြစ်သူမ…..(၁၀)နှစ်အား အဝတ်အစားဖရိုဖရဲဖြင့် တွေ့ရသဖြင့် ဖြစ်စဉ်အား မေးမြန်းခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
“ဦး…..(၅၉)နှစ်က လက်ဖက်ရည်ထုပ်ဝယ်ခိုင်းသဖြင့် လက်ဖက်ရည်ထုပ်ဝယ်၍ သွား ရောက်ပေးဆောင်စဉ်လက်ကိုအတင်းဆွဲခေါ်၍ သားမယားအဖြစ်တစ်ကြိမ် ပြုကျင့်ခဲ့ ကြောင်း”မ……(၁၀)နှစ်က ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သဖြင့်ဒေါ်…သည် မြေးဖြစ်သူ မ…အား ခေါ်ဆောင်၍ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးထံတွင် သွားရောက်အသိပေးပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်…..၏ တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းချက်နှင့်အညီ ဦး……(၅၉)နှစ်ကို မကွေးနယ်မြေရဲစခန်းမှ ပအမှတ်(ပ)၆၁၅/၂၀၁၉ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆/၃၆၃ဖြင့် အမှုရေးဖွင့်ထားပြီး ရဲအုပ်သူရဇော် မှအမှုအား စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိနေကြောင်းသိရသည်။
(၁၀)နှဈသမီးကို ဖွားယောငျးသှေးဆောငျကာ အဓမ်မပွုကငျြ့မှုဖွဈပှား
မကှေးတိုငျးဒသေကွီး၊ မကှေးမွို့၊ အောငျမတ်ေတာ(ဃ) ရပျကှကျတှငျ (၁၀) နှဈသမီးကို အိမျနီခငျြးနထေိုငျသူက ဖွားယောငျးသှေးဆောငျကာ အဓမ်မပွုကငျြ့မှု အောကျတိုဘာလ ၂၂ရကျ ညနေ (၅)နာရီအခြိနျက ဖွဈပှားခဲ့သညျ။
အောငျမတ်ေတာ(ဃ)ရပျကှကျနထေိုငျသူ ဒျေါ…. (၆၅)နှဈသညျ ညီမဖွဈသူ၏ နအေိမျသို့ ဗှီဒီယိုကွညျ့ရနျသှား ရောကျရာလမျးတှငျ အိမျနီးခငျြးဖွဈသူဒျေါ….မှနောကျမှပွေးလိုကျလာပွီး “မွေးဖွဈသူ (၁၀) နှဈသမီးကို အိမျနီခငျြးဖွဈသူ ဦး…..(၅၉)နှဈမှ ၎င်းငျး၏နအေိမျပျေါတှငျ သားမယားအဖွဈပွုကငျြ့နသေညျကို တှမွေ့ငျခဲ့ရ ကွောငျး”ပွောပွသဖွငျ့ ဦး….(၅၉)နှဈ၏ နအေိမျသို့ ခကျြခငျြးသှားရောကျကွညျ့ရှုခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။
ဦး… (၅၉)နှဈ၏နအေိမျသို့ သှားရောကျကွညျ့ရှုရာ ဦး…၏ သုံးပငျမွစေိုကျအိပျခနျးခွရေငျးတှငျ မွေးဖွဈသူမ…..(၁၀)နှဈအား အဝတျအစားဖရိုဖရဲဖွငျ့ တှရေ့သဖွငျ့ ဖွဈစဉျအား မေးမွနျးခဲ့ ကွောငျးသိရသညျ။
“ဦး…..(၅၉)နှဈက လကျဖကျရညျထုပျဝယျခိုငျးသဖွငျ့ လကျဖကျရညျထုပျဝယျ၍ သှား ရောကျပေးဆောငျစဉျလကျကိုအတငျးဆှဲချေါ၍ သားမယားအဖွဈတဈကွိမျ ပွုကငျြ့ခဲ့ ကွောငျး”မ……(၁၀)နှဈက ပွနျလညျဖွကွေားခဲ့သဖွငျ့ဒျေါ…သညျ မွေးဖွဈသူ မ…အား ချေါဆောငျ၍ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှုးထံတှငျ သှားရောကျအသိပေးပွောကွားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဒျေါ…..၏ တရားလိုပွုလုပျတိုငျတနျးခကျြနှငျ့အညီ ဦး……(၅၉)နှဈကို မကှေးနယျမွရေဲစခနျးမှ ပအမှတျ(ပ)၆၁၅/၂၀၁၉ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၇၆/၃၆၃ဖွငျ့ အမှုရေးဖှငျ့ထားပွီး ရဲအုပျသူရဇျော မှအမှုအား စဈဆေးဆောငျရှကျလြှကျရှိနကွေောငျးသိရသညျ။
« မြစ်ကြီးနားတွင် လူကြီး၊ လူငယ် ၁၀၀ ဦး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသို့ဝင်ရောက်
ဒုက္ခသည်များပြန်လာသည်ဆိုခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၀ါဒဖြန့်မှုသာဖြစ်ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဆို »